အကောင်းဆုံး CNC စောင်း Rotary စားပွဲတင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် CNC စောင်း Rotary စားပွဲတင် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်, YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အထူးပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည် CNC စောင်း Rotary စားပွဲတင်သင်ပြဿနာများရှိသည်ဒါမှမဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်ကုန်များနိမ့်ကျအရည်အသွေးကစိတ်ပျက်နေကြသည် .If ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကြိုးစားဖတ်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စုံလင်စွာသင်နှင့်သင့်ဖောက်သည်ဝစွာကျွေးမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တရုတ်ဖောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့။
ကျနော်တို့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်သည် ဖြစ်. , ကျွန်တော်တို့၏
အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုသေချာကျွန်တော်တို့၏အလားအလာဖြည့်ဆည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို, ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှတဆင့် browse သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးစေခြင်းငှါသင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူပါကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့မကြာမီဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လိုပါသည်။
ပုံစံ - GFA-320H
Worktable အချင်းØ255, Ø320
ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ်ကို radial နှင့် axial bearings များတပ်ဆင်ထားသည်.
Worktable အချင်း: Ø320 မီလီမီတာ
အလယ်ဘွားအချင်း: Ø180H7 မီလီမီတာ
T ၏အကျယ်-အထိုင်:14H7 မီလီမီတာ
အညွှန်းကိန်းတိကျမှု:၁၅ စက္ကန့်. (Rotary ဝင်ရိုး)；စက္ကန့် ၅၀. (ဝင်ရိုးစောင်း)
ပြန်လုပ်နိုင်ခြင်း:၆ စက္ကန့်. (Rotary ဝင်ရိုး)；၈ စက္ကန့်. (ဝင်ရိုးစောင်း)
စောင်းထောင့်အကွာအဝေး: -30～+၁၂၀ ဒီဂရီ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/cnc-tilting-rotary-table.html
အကောင်းဆုံး CNC စောင်း Rotary စားပွဲတင် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။